Ndị ma m ma na m nwere ike ịbụ ntakịrị ụtọasụsụ na akara edemede. Ọ bụ ezie na agaghị m aga n'ihu na-agbazi ndị mmadụ n'ihu ọha (naanị m na-agwa ha okwu na nzuzo), amaara m ka m dezie akara ngosi nke nwere okwu na-ezighi ezi, ndị na-atụgharị uche na ndị na-adịghị mma.
Ọ bụghị dị ka i nwere ike iche. E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anabata ịde blọgụ, ha na-anwa ịmepụta atụmatụ nke ntụkwasị obi na ntụkwasị obi. Ma kwenye ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ndị ahịa ga-ekpebi ikike ụlọ ọrụ niile nwere ike ime ọbụna ọrụ kachasị mkpa ya na ụtọ asụsụ na nsụgharị nke otu ọkwa dị ala nke PR.
Mana ọ bụrụ na ị na-ekwu maka azụmaahịa gị, ụlọ ọrụ gị, ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị, ịkwesịrị idobe ihe niile dị ọcha na enweghị ntụpọ ka o kwere mee.
O bughi nmehie ma ihie uzo. Ọtụtụ oge m mehiere ihe na blọọgụ m, ọkachasị ndị m na-ekwu maka mkpa ọ dị ụtọasụsụ na akara edemede. Mana enwere m ike ịlaghachi azụ ma hichaa ya. Nke ahụ bụ nnukwu ihe gbasara ịde blọgụ: ọ dịghị ihe na-adịgide adịgide, dịka akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ broshuọ. Ọ bụ a static, ndụ akwụkwọ. Omume posts ndị dị afọ atọ.
N’ihi ya, i mejọọ ihe ma ọ bụ abụọ, adala mbà. Mee ka onye ị tụkwasịrị obi lelee ha anya ma nye gị nzaghachi ziri ezi. Wee laghachi ma mezie ihe obula i chefuru n’oge di na nwunye mbu nke idezi.